Phakathi izitshalo basezindlini ngokunakekelwa izimfanelo zokuhlobisa namakhambi okwelapha celosia akuyona indawo kuqala udumo Nokho, enezimfanelo eziyingqayizivele imbali kakhulu baziswa balimi okhokhelwayo. Esikhathini imibuthano abalandeli Russian we obanzi kunayo imbali celosia ikamu, olubizwa nangokuthi velvet imbali noma iqhude ikamu. Okokuqala, lesi sitshalo libhekene inflorescences engavamile, okungaletha ezihlukile. Nakuba izimfanelo zokuhlobisa celosia is best wembula ehlobo, ngaphansi kwezimo ezifanele, kungenzeka ukutshala ebusika. Ngaphezu kwalokho, velvet imbali uyakwazi ukukhipha umphumela ekwelapheni ekulweni izifo ezithize.
Celosia scalloping akunakubangelwa izitshalo yonyaka. It has oluhlaza sifanamsindvo umkhuba iqotho amahlamvu ribbed futhi ovate nge imikhawulo ezicijile. Ngokungafani stem i-scallop amahlamvu bushelelezi, futhi umthunzi kungaba hhayi kuphela oluhlaza, kodwa amnyama onsomi. inflorescences Paniculate akhiwa izimbali amancane e ezihlukile. By the way, ezihlukahlukene imibala ezicebile futhi te ingenye izinzuzo main nemihlobiso celosia ikamu. Plant ukuphakama 30-70 cm, okukuvumela ukuba bawahlobise futhi izingadi ezincane ekhaya, zezimbali kanye emgwaqweni. Isikhathi izimbali ihlala kusukela maphakathi no-ihlobo ukuze yesithwathwa ekuseni. Le nqubo imbewu Kusengenzeka iminyaka 5.
Njengoba okwazalelwa kuyo celosia - eningizimu yezwe, futhi kuyinto efiselekayo ukhule endaweni libalele evikelwe umoya. Ithanda a asidi nomhlabathi okuxekethile, kodwa ukuqeqeshwa okukhethekile kungenzeka futhi yalokho okuhle sezwe nzima. Esimeni sesibili, kufanele ungeze sandy inhlabathi ingxenye encane ezonikeza Looseness phansi. Ngaphezu kwalokho, celosia ikamu iyaphendula kahle futhi humus, futhi kunoma iyiphi hlobo inhlabathi.
Uma uhlela on kokwehla ekhanyayo, kufanele kwenziwe ehlobo - ekuqaleni kuka June. Ikakhulukazi mthetho iphathelene izithombo abasha noma neakklimatizirovannyh. Esimeni semakhaya kancane frost isitshalo uyafa. Kodwa lokhu akusho ukuthi okutshalwe imbali is contraindicated ebusika. Konke kuncike kule mibandela ukuthi kungenziwa wamisa egumbini. Into kuphela ukuthi kuvimbela ukuthuthukiswa egcwele celosia ngalesi sikhathi - singakutholi ukukhanya kwelanga.
Uma kulinywe kulindeleke ekhaya, inkomba best of lokushisa ekamelweni kuyoba 18 ° C. Kulokhu 14 ° C - kuyinto umkhawulo ovumelekile aphansi. Okuxakayo ukuthi celosia ikamu, lapho ukutshala senzeka ngaphandle, bafune ngemibandela lokushisa futhi ithwale i abafumana. Nakuba imingcele ukufundwa omubi thermometer bahlale bemazi kuleli cala. Kufanele kuqashelwe izimo ukupholisa. Ngokwesibonelo, uma izinga lokushisa udlula 25 ° C, igumbi kumele umoya.
Celosia Kunconywa ukuba sikhule imbewu, njengoba Cherenkov imifanekiso ayikwazanga ukuhlinzeka izakhiwo yobuhle kakhulu, ngoba abathanda lesi sitshalo.
Isikhathi elikhulu ukuhlwanyelwa - ekupheleni kukaMashi noma ezinsukwini zokuqala April. Kakade kweviki "cockscomb" germinates. mbewu ezinabantu akudingekile, kungcono ukuhambisana kwezikhawu 3 cm. Imbewu bahlakazekile umswakama umhlabathi, bese embozwe ifilimu, okuyinto isuswe ngesonto emva amahlumela zokuqala zitholiwe.
Le ndlela Kunconywa ngaphezulu balimi abanolwazi bajwayelene izimfuno ukunakekelwa wenza celosia ikamu. Ezikhula imbewu engabondli abakubo izinyathelo ekhethekile inqubo yokukhula imbali, kodwa izithombo anganika imiphumela eyanelisayo kuphela ngokunakekela ngokucophelela izithombo. Phakathi kwezinyathelo okuphoqelekile okwenziwa ezikhungweni zokunakekela - ivikela ethambile izithombo abasha ukusuka elangeni. Esikhathini yasendlini le njongo ke ngokuvamile esetshenziselwa iphephandaba, okuyothi scallop abasha ehlanganiswa okwesikhashana.
Ukutshala izithombo ekhiqizwa engadini imbali noma flowerbed nge isinyathelo esithile. Ngokwesibonelo, uma ukufika nalehleliwe izinhlobo ezinkulu, nalesikhathi kufanele kube ngu 30 cm, futhi uma celosia yemifino - 15 cm, kodwa ezimweni eziningi a celosia ikamu ekuqaleni etshalwe esitsheni futhi esigabeni sokuqala wokukhula nokuthuthuka endaweni .. Lapho plantlets ikhula, kufanele bagxuma imbiza ukuze ukuphakama 8 cm, kodwa okungcono ekuqaleni itshalwe izithombo ku ezitsheni ezihlukahlukene -. Uma okunye kuhlelwe ushintsho ekhanyayo, le ndlela aqede umonakalo kungenzeka ohlelweni impande.
Inkinga eyinhloko e ukunakekelwa cockerel ikamu - isidingo ukudala izimo hothouse. Abazalanisi alethwe izinhlobo eziningi izitshalo abandayo nemithi, kodwa anikeze best umphumela zokuhlobisa kuphela kwezimo ezifanele ezishisayo. Okubalulekile, celosia ikamu, ukutshalwa kanye nokugcinwa Kwenziwa on emphemeni noma ensimini ekhaya futhi efunwa kakhulu. Okokuqala, kufanele ukunikeza ukufinyelela ilanga, futhi okwesibili, lokulawula amanzi nokudla. Thela it akudingekile, kodwa ngokulinganisela ukuze banikeze izimpande umswakama kuyadingeka.
I Ukugqoka celosia linesizotha. Lesikahle kungaba supply alinganisiwe phosphorus-potassium Umanyolo okuwuketshezi. Ngokuphambene, nitrogen kokukhulelwa is hhayi Kunconywa, njengoba igalelo ekukhuleni okwandisiwe mass oluhlaza. Uma celosia ikamu esekhulile yemifino, amahlamvu ngalesi Ukudla is ngokuphelele labasibekela yi inflorescence. Futhi ukuze kulondolozwe kohlobo enempilo futhi zezimbali i-scallop kufanele ahlole njalo amaqabunga ukususa izimbali omisiwe.
Ukuvikelwa ezifweni kanye izinambuzane
Omunye eziyingozi kakhulu izinambuzane celosia kuyinto aphid, esithinta namaqabunga kanye amahlumela. In ekulweni ke nezinye izinambuzane zisiza afitsidy ngempumelelo. Ngezinkinga ezivamile ethambile izithombo abasha zihlanganisa blackleg - ukuvimbela lesi sifo kufanele ziqashwe futhi ayakhala. Kufanele kwenziwe ekuseni futhi kuphela izinsuku sunny. Lesi sitshalo ozwelayo sezulu izenzakalo, sithokomele lapho liguqubele ungakwazi ukubeka eceleni izinqubo ukuthambisa.
Uma celosia ikamu kodwa kwaba ukuthuthukiswa "blackleg", kufanele athambise umhlabathi, alisibekele umlotha ukunciphisa ukuthambisa. Iqiniso liwukuthi ukuntuleka amanzi noma amanzi okweqile kungabangela ukuthuthukiswa izifo fungal. Ngaphezu kwalokho, kusho ukuthi ungaba yingozi yensimbi ukuntula, okuholela ekwandeni pH enhlabathini bese leaf chlorosis. Celosia ukubhekana nalesi sifo ekulungiseleleni chelates (uhlobo yensimbi compounds).
Isisusa esikhulu abantu abanquma abe celosia ikamu - Yebo, indima zokuhlobisa. Lesi sitshalo yinhle futhi njengengxenye ilungiselelo imbali embhedeni, njengenhlangano ezama ukubuyisa umhlobiso ezimele on emphemeni. Libuye uhlobo olulodwa evame ukusetshenziswa ekwenzeni amalungiselelo flower. Ukuze wenze lokhu, amankampani athengisa usike izimbali ekwakhekeni imbewu ome nabo endaweni epholile emnyama, ngakho baqhubeka ukuma nombala.
Famous for celosia nezimfanelo kwezokwelapha. Ngo Folk imithi, isetshenziswa njengendlela yokuqinisa buka, ukwelapha izifo negazi, ukuqeda izikelemu kanye ukuphulukiswa izilonda emlonyeni. Ngabomvu nemibuthano ochwepheshe isitshalo kungenxa ikhono layo ukulwa umdlavuza nesifo sikashukela. Ikakhulukazi, ukusetshenziswa enwetshiwe leaf celosia pectinate sikashukela njengoba isithako kusaladi, amasobho, garnishes nokunye okunjalo. D. Kunezinye, iresiphi iyashelela okubandakanya ukusetshenziswa ezomile amaqabunga iqhude ikamu. Ukulungisa edingekayo 2 tbsp. l. ngamahlamvu omisiwe nezihloko 1 inkomishi amanzi abilayo. Amahlamvu zigcwele amanzi futhi wafaka cishe imizuzu engu-30. Amandla yokwamukela infusions enjalo kuncike isifo namandla aso.
Sifunda wiring idayagramu SP 212-45
Ungalokothi ukukwenza esontweni!
EGoogle - kusukela ekudalweni kuya isimo samanje
Yini ukuthatha nge isifuba esomile. isifuba esomile: yini imithi ukusiza
Crossovers Iningi walkable futhi SUV emhlabeni simo, izici
Annuity nokukhokhwa umahluko ku yemali ebolekwayo: emihle nemibi ohlobo ngalunye